Erdogan oo Mareykanka laba mid kala dooransiiyay kadib kulan ay yeesheen Vladimir Putin | Dayniile.com
Home Warkii Erdogan oo Mareykanka laba mid kala dooransiiyay kadib kulan ay yeesheen Vladimir...
Erdogan oo Mareykanka laba mid kala dooransiiyay kadib kulan ay yeesheen Vladimir Putin
Isagoo tilmaamaya in Biden uu kula kulmi doono shirka G20 ee bisha soo socota ka dhacaya Rome, ayuu madaxweynuhu yiri, “Waxaan rajeynayaa inaan Glasgow ka aadi doonno halkaas. Waxaan ku kulmi doonnaa Glasgow sidoo kale. Waxay ka dhigan tahay in xoogaa tallaabooyin fiican la qaaday.”
Previous articleQoraal uu soo saaray agaasimaha Hay’adda Qaxootiga Norway oo ka warbixiyay xarig dad Jimcihii lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Tripoli.
Next articleCiidamada Dowlada Federaalka oo ku qul qulayo magaalada Dhuusamareeb
Allaha unaxariistee Waxaa xalay Konfur Afrika Lagu dilay Maxamed Ismaaciil Kiish, oo kamid ahaa Odayaasha ugu magaca dheer Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Konfur Afrika, waxaana...